Tondro fiaretana haran-dranomasina - Hawai'i, 2016 | Fiaretana haran-dranomasina
Tondro momba ny hamafin'ny haran-dranomasina - Hawai'i, 2016
Nandritra ny Fivoriambe Iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana IUCN, sehatry ny loharanom-piarahamonina sambo sy mpahay siansa ary mpitsabo, misolo tena firenena sivy dia nanatrika seminera iray mba hahafantarana ny fomba hanaraha-maso ny vatohara ho an'ny faharetana ary hampiasa izany fampahalalana izany amin'ny fitantanana ny fitantanana.
Ireo mpandray anjara amin'ny atrikasa dia nianatra momba ny fitantanana miorim-paka - inona izany, nahoana no zava-dehibe, ary ahoana no ahafahan'izy ireo hampiditra hevitra sy paikady ho an'ny ezaka fitantanana efa misy. Nahazo ny ambangovangony izy ireo hijery ny fanombanana ny haran-dranomasina momba ny haran-dranomasina natokana ho an'ny nosy Hawai'i (inona no ilàna ny fanombanana ny fanombanana ara-tontolo iainana amin'ny alàlan'ny famolavolana drafitra sy fanangonana tahirin-kevitra ho an'ny fanadihadiana) avy amin'ny talen'ny Hawai'i Programme Dr. Conklin. Izy ireo koa dia nentina tamin'ny ohatra sy tantara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mikasika ny fomba nandikana ny vokatry ny fanombanana ny alàlan'ny alàlan'ny fitantanana sy ny politika avy amin'ny Dr. Rodney Salm, Mpanolotsaina loholona, ​​ny Diviziona Pacific Pacific, ny Nature Conservancy.
Roa ambin'ny folo tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa no nanatevin-daharana ny fivoriana faharoa - fitsangatsanganana snorkel tolakandro nankany amin'ny haran-dranomasina roa ao amin'ny Helodrano Kaneohe mba hanomezana torolàlana momba ny famantarana ireo mari-pamantarana faharetana eny an-tsaha.